Endrik'io pejy io tamin'ny 1 Janoary 2019 à 17:13
934 octets ajoutés , il y a 3 ans
Endrik'io pejy io tamin'ny 1 Janoary 2019 à 14:33 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 1 Janoary 2019 à 17:13 (hanova) (esory)
Ny teny hoe tsindrimandry dia fandikana ny teny latina hoe ''divinus inspirata'' sy ny teny grika hoe ''θεοπνευστος / theopneustos'' izay midika ara-bakiteny hoe "tsofin'Andriamanitra", araka ny hita ao amin'ny [[Epistily faharoa ho an'i Timoty]] (2Timoty 3.16-17). Tsy nandika ara-bakiteny io teny hoe ''θεοπνευστος'' io ny [[Baiboly amin'ny teny malagasy]].
Tamin'ny nandikan'i Hieronimo (na Jerôma) ny Baiboly ho amin'ny teny latina dia nadikany amin'ny teny hoe ''inspirata'' ny teny grika hoe ''theopneustos.'' Ny hoe ''inspirata'' dia avy amin'ny matoanteny hoe ''inspirare'' izay fikambanan'ny tsitinteny hoe ''in''- (izay midika hoe "anaty") sy ny hoe matoanteny hoe ''spirare'' (izay midika hoe "miaina" na "misefo"). Ny hevitra voalohan'ny hoe inspirare dia "misefo ao anaty" na "mitsoka ao anaty". Izao no nandikana ny 2Tim. 3.16-17 ao amin'ny [[Volgata]]:
Tsy nandika ara-bakiteny io teny hoe ''θεοπνευστος'' io ny [[Baiboly amin'ny teny malagasy]]. Ny Baiboly protestanta mampiasa ny andian-teny hoe "''nomen'ny tsindrimandrin'Andriamanitra''", ny Baiboly katolika nampiasa ny hoe "''avy amin'ny fanilovan'Andriamanitra''" fa ny Baibolin'ny Vavolombelon'i Jehovah kosa mampiasa ny andian-teny hoe "''avy amin'ny herin'ny fanahy masina''". Samy misy antony ara-teolojia ny nisafidianan'ny mpandika teny ireo andian-teny ireo.
"Ny Soratra Masina iray manontolo dia <u>avy amin'ny herin'ny fanahy masin'Andriamanitra</u>, ary mahasoa mba hampianarana, hananarana, hanitsiana izay diso, hanafaizana araka ny fahamarinana, mba hahatonga ny olon'Andriamanitra ho tena mahay sy ho ampy fitaovana tsara ho amin'ny asa tsara rehetra." (''Ny Soratra Masina'' (Vavolombelon'i Jehovah)).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/963571"